Army stake threatens to derail $4bn platinum mine in Zimbabwe - Worldnews.com
Army stake threatens to derail $4bn platinum mine in Zimbabwe
A plan to build Zimbabwe’s biggest platinum mine at a cost of about $4bn is floundering because a military stake in the project has deterred potential backers, according to people familiar with the funding discussions.
The African Export-Import Bank has the mandate to raise money for the mine, a joint venture between
A plan to build Zimbabwe’s biggest platinum mine at a cost of about $4-billion is floundering because a military stake in the project has deterred potential backers,...
Mining Weekly 2019-05-15
Zimbabwe's platinum mine commissions smelter
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa (R, front) officially opens a smelter at Anglo American's Unki Platinum Mine in Shurugwi, Midlands Province, Zimbabwe, May 16, 2019....
HARARA, May 13 (Reuters) - Zimbabwe's state power utility imposed the worst rolling blackouts in three years on Monday, with households and industries including mines set...
Against the backdrop of severe electricity constraints in Zimbabwe, Anglo American Platinum officially opened a $62m smelter at its Unki mine in that country. The 193,000...
Army puts backers off multibillion-dollar Zimbabwe platinum mine
The mine is held in a joint venture between Zimbabwe's Defence Industry, a Russian investor and others. ......
A plan to build Zimbabwe’s biggest platinum mine at a cost of about $4bn, about R57bn, is floundering because a military stake in the project has deterred potential backers, according to people familiar with the funding discussions. ......
HARARA, May 13 (Reuters) - Zimbabwe has started rolling power cuts lasting up to eight hours that will also hit mines, a schedule from the state power utility showed on Monday, after reduced output at both the largest hydro plant and ageing coal-fired generators. The power cuts will add to mounting public anger against President Emmerson Mnangagwa´s government as Zimbabweans...
PLATINUM WEEK-Tharisa seeks to tap Zimbabwe\_'s battery minerals potential
By Barbara Lewis LONDON, May 15 (Reuters) - Platinum group metals miner Tharisa is expanding into Zimbabwe with a drilling programme that could deliver results early next year and develop the company's exposure to battery minerals, its chief executive said on Wednesday. Tharisa is established in the Bushveld region of South Africa, where it is also investing in increasing...
EXPLAINER-Why Zimbabwe faces worst power cuts in three years
By MacDonald Dzirutwe HARARE, May 16 (Reuters) - Zimbabwe is experiencing its worst power cuts in three years, lasting up to 10 hours daily in some areas and threatening mining output in one of the world's biggest platinum and gold producers. The sector, which generated most of Zimbabwe's $4.8 billion of export earnings last year, is crucial to President Emmerson Mnangagwa's...